Category သင်ကြားရေးဆိုင်ရာ application များ – Myanmar Mobile App Edition: Myanmar | ပြည်တွင်းပြည်ပမုိုဘိုင်းသတင်းများ
Toy Story Smash It! v1.1.0 Apk Game (37.8 Mb) Olive PDF Tools-V.1.00- Apk-(3Mb) Fokker (Wanted) Go Locker Theme Edjing PRO DJ Mixer Turntables V1.2.1 Apk-(19Mb) RedLink မှ WiMax အင်တာနက်လိုင်းများကိုအခမဲ့တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်မည် Home
idevices များအတွက် လက်တွေ့သုံးနည်းပညာ – သန်းထိုက်(ရွှေရိပ်)(12MB)
IPhone IPad IPod ကိုင်ထားတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် လေ့လာသင့်တဲ့ စာအုပ်ကောင်းလေးပါ
Download>>>mirrorupload (or)zippyshare (or)sharebeast.
More... by အမျိုးကောင်းသား | Published 55 days ago
By သက်နိုင်စိုး On Thursday, June 14th, 20120Comments Sony Xperia Buildnumber (4.0.2.A.0.62) Firmware အမျိုးအစားတွေကို Root လုပ်နည်း [ Without bootloader ] Share
အခုနောက်ပိုင်း android OS သုံး Sony Xperia ဖုန်းမော်ဒယ်တော်တော်များများဖြစ်တဲ့
Sony Xperia X10/Arc/Arc More... By သက်နိုင်စိုး On Saturday, June 2nd, 20120Comments Money-Origami v2.1.1 App for Android Shareဒီ app လေးက စက္ကူခေါက်နည်းသင်ပေးတဲ့ app လေးပါ။ သူကတော့ ပိုက်ဆံနဲ့ ခေါက်နည်းပဲပါပေမဲ့ More... By သက်နိုင်စိုး On Friday, May 25th, 20122Comments iOS 5.1.1 ကို Absinthe 2.0 နှင့် Untethered Jailbreak ပြုလုပ်နည်း [ Tutorials ] Share iOS 5.1.1 အတွက် Untethered Jailbreak ပြုလုပ်ဖို့အတွက်
Absinthe 2.0 အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ထွက်ပေါ်လာပါပြီ။
Absinthe More... By သက်နိုင်စိုး On Monday, May 21st, 20120Comments iOS 5.1.1 အတွက် ထွက်ပေါ်လာမဲ့ Untethered Jailbreak tool Absinthe v2.0 Demo [ Video ] Share
ဒီနေ့ မနက်စောစောမှာပဲ Pod2g က သူရဲ့ Twitter timeline မှာ
iOS 5.1.1 အတွက် untethered jailbreak အတွက် နောက်ဆုံးအဆင့်သို့
ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်း More... By သက်နိုင်စိုး On Friday, May 11th, 20122Comments iPhone 4S, iPad2 အတွက် iOS 5.1.1 to 5.0.1 နှင့် iPad3iOS 5.1 သို့ Redsn0w အသုံးပြုပြီး downgrade ဆင်းနည်း Share
iPhone Dev Team က Redsn0w tool အသစ်ကို တရားဝင်ထုတ်ဖော်ပေးလိုက်ပါပြီ။
အခု Redsn0w tool က မိတ်ဆွေတို့ iPhone More... By သက်နိုင်စိုး On Monday, April 23rd, 20122Comments Samsung Galaxy အမျိုးစားများအား Root & UnRoot ပြုလုပ်နည်း Share
Universal Gingerbread Root SAMSUNG GALAXY GT-S5570, GT-S5570B, GT-S5570I, GT-S5570L, GT-S5660, GT-S5660M, GT-S5660L, GT-S5660V, SHW-M290K (Korean GIO), GT-S5670, GT-S5670B, GT-S5670L, GT-S5830, GT-S5830B, More... By သက်နိုင်စိုး On Friday, March 30th, 2012 1 Comment Android device တွေအတွက် Adobe flashplayer install ပြုလုပ်နည်း Share
Android device တွေအတွက် Adbode flashplayer အသုံးပြုလို့ရအောင်
မိမိ Android More... By အီးတီ On Saturday, March 17th, 20120Comments iPad3(သုို့မဟုတ်) New iPad 4G ကိုမြည်းစမ်းခြင်း Share
New ipad 4G ကို Australia, Japan, Hong Kong, Singapore, စတဲ့
နိူင်ငံတွေမှာ More... By အီးတီ On Sunday, February 26th, 20120Comments Android OS တွေထဲက Features အသစ်တွေနဲ့ အံ့အားသင့်စေမဲ့ Ice Cream Sandwich Android 4.0 ShareSource Link : andriodflip
Google ရဲ့ မယုံကြည်နိူင်လောက်အောင် အံ့အားသင့်စေမဲ့ Android OS တွေထဲက
တခုကတော့ More... Next Page »